9 Great Books About Business Intelligence - Tech Sound
Business Intelligence (BI) ဟာ လျင်မြန်စွာနဲ့ ပိုမိုလွယ်ကူလာပြီး ကြီးမားတဲ့အချက်လက်တွေကို ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးလာပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း BI ကို အသုံးပြုပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ “Business Intelligence” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို သိရုံသိပြီး ပိုမိုလေ့လာချင်တဲ့ သူတွေနဲ့ BI Analysis ကိုပိုမိုထိရောက်စေချင်တဲ့ စီးပွားရေးမန်နေဂျာတွေအတွက် တကယ့်ကို ထိရောက်တဲ့ စာအုပ်တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
1. Successful Business Intelligence : Unlock The Value of BI and Big Data” by Cindi Howson
အတွေ့အကြုံရှိ Business Intelligence လေ့လာသုံးသပ်သူ စာရေးဆရာမ Cindi Howson က ဒီစာအုပ်မှာ Business Intelligence ကို အောင်မြင်စွာ ပေါင်းစည်းနိုင်သလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ် ။ BIရဲ့ နောက်ကွယ်က သီအိုရီများကို ဆွေးနွေးရုံ သက်သက်မဟုတ်ဘဲ အောင်မြင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက အသုံးပြုတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းပညာတွေကို တိကျစွာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
BI ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၊ BI Strategy တွေကနေ Business Goal အထိ ဘယ်လို Customize လုပ်မလဲ? စ‌တာတွေအတွက် မှန်ကန်တဲ့ Applicationကနေ Training တွေကိုရွေးချယ်ဖို့ Howsonက ဖော်ပြထားပါတယ် ။ Howsonရဲ့ သက်သေပြနမူနာတွေနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက တကယ်ကိုမှ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ် မှတ်ယူလို့ရပါတယ် ။
“Business Intelligence Guidebook” ထဲမှာတော့ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးစနစ် တစ်ခုလုံးကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ် ။ Shermanက BI concept ထဲက အဆက်အစပ် ကူးပြောင်းမှုတွေကို မှတ်သားထားပြီး BI အထဲမှာရှိတဲ့ ဗိသုကာဒီဇိုင်းနဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပါတယ် ။
Sherman က ဘယ် Business အရွယ်အစားမဆို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ BI အတွက် စီမံကိန်းဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု lifecycleတွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ် ။ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့် BI တည်ဆောက်ဖို့ လမ်းညွှန်တွေကို စာဖတ်သူအတွက် ရှင်းပြထားပါတယ် ။ ထပ်ဆောင်းကိုးကားချက်များ ၊ templates နဲ့ ဥပမာများအတွက် website တစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ် ။ Sherman ရဲ့ လမ်းညွှန်စာအုပ်က စာဖတ်သူတွေအတွက် Dataအချက်အလက် ပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွေကနေတစ်ဆင့် BI အလုပ်လုပ်ဖို့ အကူအညီ ပေးနိုင်ပါတယ် ။
3. “Big Data in Practice : How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results” by Bernard Marr
ဒီစာအုပ်မှာတော့ Big Dataနဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွေကို ကမ္ဘာ့အစစ်အမှန် နမူနာတွေကနေတစ်ဆင့် Business Intelligence ကိုပြသဖော်ပြထားပါတယ် ။စာရေးသူ Bernard Marr ဟာ သူတို့ အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် BIကို ဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့လဲဆိုတာကို ဖော်ပြထားပါတယ် ။ စာရေးဆရာက သူတို့အသုံးပြုသောဒေတာ ၊ သူတို့ဖြေရှင်းရန် ကြိုစားနေသော ပြသာနာများ နဲ့ သူတို့ ဘယ်လိုပြီးမြောက်ခဲ့ကြောင်း သူတို့ ကြုံတွေခဲ့ရတာတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ။
4. ” Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Application” by Larissa T. Moss and Shaky Atr
” Business Intelligence Roadmap” က စာဖတ်သူတွေကို BI စီမံကိန်း တစ်ခု စတင်ဖို့ရန် ကူညီလမ်းညွှန်ပေးပါတယ် ။ စာအုပ်ထဲမှာ စာဖတ်သူတွေကို BI Application တစ်ခုရဖို့ရန် အဆင့်တွေကို အဆင့်လိုက် ဖော်ပြထားပါတယ် ။ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ် – ပထမပိုင်းမှာတော့ BI စီမံကိန်းရဲ့ အဆင့် ၆ ဆင့်ပါဝင်ပါတယ် ။ ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ဖွံဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကိုးကားချက်တွေနဲ့ ကိရိယာတွေ ပါဝင်ပါတယ် ။ အဆုံးမှာ စာရေးသူနှစ်ယောက်ဟာ အတွေ့အကြုံ ကနေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားတဲ့ BIလုပ်ငန်းစဉ် ၊ အကြံဉာဏ်နဲ့ Dos and Don’ts စည်းမျဉ်းတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ် ။
“Business Intelligence For Dummies” ကတော့ အတွေ့အကြုံမရှိသူအားလုံးအတွက် BI နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ စာဖတ်သူများ စတင်နိုင်ရန် အခြေခံသဘောတရားနဲ့ ဝေါဟာရများကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ် ။ဒါ့အပြင် စာအုပ်ထဲမှာ စာဖတ်သူများအတွက် သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များ ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း ၊ မဟာဗျူဟာ တစ်ခုကိုတီထွင်ခြင်းနှင့် BI ကိုနေရာချထားခြင်းများ ပါဝင်ပါတယ် ။
6. “Hyper: Changing the way you think about, plan, and execute business intelligence for real results , real fast! ” By Gregory P. Steffine
“Hyper” က အခြားစာအုပ်တွေနဲ့ အနည်းငယ်ကွာခြားပါတယ်။ Business Intelligence ကို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဝင်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ လက်တွေ့ကျကျချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ကျယ်ပြန့်သောအမြင်အပေါ်ကို ပိုပြီး Focusလုပ်ထားပါတယ် ။ BIလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေအပြင် ၎င်းတို့ကို ဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်ကြောင်း ၊ အထောက်အကူပြုမယ့် နည်းလမ်းတွေ ပါဝင်ပါတယ် ။ စာအုပ်မှာ လက်တွေ့ကျတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ စီမံကိန်းတွေရဲ့အကြံဉာဏ်များနဲ့ ပြည့်နက်နေပါတယ် ။
7. “Learning Tableau 10- Second Edition: Business Intelligence and Data visualization that brings your business into focus” by Joshua N. Milligan
ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ Joshua Milligan က Tableauမှာ ရင်သပ်ရှုမော်ဖွယ် ပုံဖော်ခြင်းတွေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကို ဆေးနွေးတင်ပြထားပါတယ် ။စာအုပ်က စာဖတ်သူတွေကို အချက်အလက်များကို ဘယ်လိုထိရောက်စွာတင်ဆက် ရမယ် အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လေ့လာနိုင်မယ် မတူညီတဲ့ Modelsတွေကို အသုံးပြုပြီး ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို ဘယ်လိုခွဲခြားရမယ် စတာတွေကို သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ် ။
8. “Business Intelligence: The Savvy Manager’s Guide” by David Loshin
“The Savvy Manager’s Guide” စာအုပ်ဟာ business managerတွေအတွက် BI ကို စတင်ဖို့ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ် ။ဒီစာအုပ်က BIရဲ့ အဓိက အယူအဆတွေနဲ့အတူ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗန်းစကား ၊ တွဲဖက်ပါဝင်တဲ့ဝေါဟာရတွေကို မိတ်ဆက်ပေးပါတယ် ။ Loshinဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းစဉ်နဲ့ ၎င်းဟာအောင်မြင်မှုအတွက် ဘယ်လိုအထောက်အကူဖြစ်စေသလဲဆိုတာကို မန်နေဂျာများအား ‌လမ်းညွန်ပေးပါတယ် ။
စာရေးဆရာ Jeremy Kolb ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် BI က ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ? ၎င်းသည် ဘာကြောင့်စကားလုံးဖြစ်လာသလဲ စတာတွေကို ဆွေးနွေးထားပါတယ် ။ သူက BI ကို အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ ဘယ်သူမဆိုနားလည်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။